Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Aretina COVID amin'izao fotoana izao any amin'ny Toeram-pialan-tsasatra amoron-dranomasina
Vaovao Mafana • Karaiba • fanabeazana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny fitsangatsanganana mandritra ny COVID-19 dia midika fa tokony ho vonona amin'ny tsy ampoizina ianao ary hanova haingana. Miorina amin'ny isa ankehitriny ny tahan'ny aretina amin'ny
Toerana amoron-dranomasina dia mahatratra hatramin'ny 12,000 ka hatramin'ny aotra raha oharina amin'ny tahan'ny aretina ankehitriny amin'ny toerana misy mponina 1 tapitrisa.
Misokatra ho an'ny fitsangatsanganana sy fizahantany ihany koa ny toerana tora-pasika eto amin'izao tontolo izao, ny sasany ho an'ireo mpandeha vaksiny ihany.
Mpandeha maro no mitady hiala sasatra amin'ireo morontsiraka malaza eran'izao tontolo izao, saingy te-hilamina sy ho salama hatrany.
Raha tsy mijery ny famerana ny dia ary mifototra amin'ny angona avy Worldometers, eTurboNews mitambatra lisitra. Manome fampidirana vitsivitsy momba ny satan'ny COVID-19 ankehitriny
Sarotra ny mijery nomerao marina. Ny firenena kely iray mazava ho azy dia manana isa ambany raha oharina amin'ny firenena lehibe.
Amin'ity fampitahana ity, eTurboNews niankina tamin'ny caseload ankehitriny nandritra ny 7 andro farany tamin'ny COVID-19 mifandraika amin'ny mponina 1 tapitrisa. Ireo firenena misy olona latsaky ny 1 tapitrisa dia isaina araka ny lanjany raha misy olona iray tapitrisa.
Miorina amin'ity laharana Nosy Virgin British ity miaraka amina tranga miisa 11,989 COVID-19 izay niasa tao anatin'ny 7 andro lasa, toa toerana tora-pasika misy fanamby goavana izany, raha i Oman kosa manana tranga aotra dia mety ho toerana azo antoka indrindra hampiala-voly olona eto an-tany.
Tsy misy isa majika, ary misy antony hafa ihany koa, fa ny toeran-kaleha tsy misy 1000 ny aretina isan-tapitrisa dia hanokatra morontsiraka tsara ho an'ireo afaka mandeha soa aman-tsara.
Ny Karaiba ohatra dia faritra izay tsy misy nosy mitovy amin'ny iray hafa. Ny Nosy Britanika Britanika dia manana aretina mitentina 12,000 isan-tapitrisa avo indrindra raha ampitahaina amin'i Grenada izay manana isa ambany indrindra any Karaiba miaraka amin'ny 27. Ny toerana itobiana amoron-dranomasina lehibe indrindra ao anatin'izany Bahamas, I Jamaika, i St. Lucia, na ny Repoblika Dominikanina dia ao anatin'ny vondron'ireo firenena izay azo heverina ho ambany risika.
Oman Beaches, COVID ambany indrindra amin'ny toerana tora-pasika: ZERO
Any Seychelles, ny isan'ireo aretina vaovao dia nidina 8% tamin'ny herinandro lasa teo, fa noho ny tranga mavitrika 555 ao amin'ny firenena misy olona 98,000+, dia mbola hita ihany ny taha ambony. Sipra, Martinique, Cuba, na Espana dia ao anatin'ny toe-javatra mitovy amin'izany.
Isan'ny tranga COVID mavitrika isaky ny iray tapitrisa any amin'ny toeram-pialan-tsasatra amoron-dranomasina
hatrany ambony ka hatrany ambany:
Nosy Virgin British: 11,989
Espana: 3,414 XNUMX
Monaco: 2,504 XNUMX
Afrika atsimo: 1,401
Trinidad sy Tobago: 1,033
Polinezia frantsay: 708
Tiorka sy Caicos: 407
Arabia Saodita: 238
Repoblika Dominikanina: 230
Alemanina: 126 XNUMX
Sao Tome sy Principe: 63
Côte d'Ivoire: 16
Nouvelle Zélande: 10